HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) V2-60 LED Street Lamp လမ်းမီး
190000 ~ 190000 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) V2-60 LED Street Lamp လမ်းမီး အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 60W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ ၁ ပါကင် - 1 လုံး
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) V2-60 LED Street Lamp လမ်းမီး အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 90W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ ၁ ပါကင် - ၁ လုံး
OPPLE U-Series LED Ceiling Lamps The Symbol of Youth.... Make your room looks younger.... Refresh your creative mind at your home..... U Light UpaWonderful Life! 2016 New Model Products are now available in Myanmar.
Hight Quality Box Lights
ပိုမိုမြင့်မားသောအလင်းစွမ်းအားကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်ပြီး လွယ်လွယ်နှင့်သံချေးမတက်စေနိုင်ပါ။ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အရည်အသွေးမှာအထူးကောင်းမွန်သောကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ LED Box Lights များကိုအမျိုးအစားအလိုက်ရွေးချယ်နိုင်ရုံမက Lighting Color မှာလည်း ၂မျိုးရှိသည့်အတွက် တပ်ဆင်မည့်နေရာနှင့်လိုက်ဖက်သော အရောင်အားစိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။အလူမီနီယမ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အပူဒဏ်လွန်ကဲမှုကို ခံနိုင်သည်။မျက်နှာကျက်အလင်းအားကောင်းစေရန် လှပစေရန် တာရှည်ခံစေရန် တပ်ဆင်လိုပါက ကျွန်တော်များ Precious Lights Co.,Ltd တွင် ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ။
HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) V5-120 LED Street Lamp လမ်းမီး
200000 ~ 200000 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) V5-120 LED Street Lamp လမ်းမီး အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 120W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ ၁ ပါကင် - ၁ လုံး
140000 ~ 140000 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) V6-60 LED Street Lamp လမ်းမီး အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 60W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင် - ၁ လုံး
HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) LED Ceiling Downlight A (3W / 5W / 7W / 9W / 12W / 15W / 18W)
3500 ~ 11000 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) LED Ceiling Downlight A အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 3W / 5W / 7W / 9W / 12W / 15W / 18W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင် - ၁၀ လုံး
HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) LED Ceiling Downlight B (3W / 5W / 7W / 9W / 12W / 15W / 18W)
3000 ~ 12000 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) LED Ceiling Downlight B အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 3W / 5W / 7W / 9W / 12W / 15W / 18W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင် - ၁၀ လုံး
7000 ~ 32000 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) LED Ceiling Downlight COB အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 5W / 8W / 10W / 15W / 20W / 25W / 30W / 40W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင် - ၁၀ လုံး
အကောင်းမွန်ဆုံး အရည်အသွေးမြင့် ကြည်လင်တောက်ပသော Crystal နှင့် သတ္တုပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော မီးဆိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Electroplating ကို အလွှာအထပ်ထပ်ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားသောကြောင့် ပြောင်လက်တောက်ပပြီး လှပဆန်းသစ်စေသည်။ Company မှ Product များသည် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အင်ဂျင်နီယာများမှ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကို Everest မှ အာမခံမှုများ ပေးပြီး ရောင်းချပေးနေပါသည်။ ယခုပြသထားတဲ့ မီးဆိုင်း၏ အလှတရားကို လူကြီးမင်းများ နေအိမ်၊ ဟိုတယ် နှင့် မင်္ဂလာခန်းမဆောင်များတွင် ကျက်သရေမင်္ဂလာ တိုးပွားအောင် အလှဆင်ပြီး အသုံးပြုလို့ရတဲ့ မီးဆိုင်းတစ်ခုပါ။ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ Crystal လေးများက အတောက်အဆုံး နှင့် အကြည်လင်ဆုံး အလင်းရောင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာ နှင့် ခေတ်မှီစက်ကိရိယာများ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော လှပဆန်းသစ်သော မီးဆိုင်းကြီးကို Everest မှ အမျိူးမျိူးသော အာမခံချက်များ နှင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိရာ အားပေးခဲ့ကြသော Customer များကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
လန်းဆန်းတက်ကြွသော ဒီဇိုင်းဖြင့် Lighting Furniture
ဒါကတော့ အလင်းထည့်ထားတဲ့ ထိုင်ခုံ နှင့် စားပွဲ အတွဲလိုက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင်လေးဖြင့် ထည့်သွင်းကာ အော်ဒါရယူနိုင်ပါသည်။ ယခုပြထားသလို အရောင်စုံ နှင့်လည်း ရရှိနိုင်သလို တစ်ရောင်ထည်း အတွဲလိုက်လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ပါတီပွဲများ နှင့် Bar တွေမှာ အသုံးများသော ချစ်စရာကောင်းပြီး လှပတဲ့ Lighting Furniture ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်များ အကြိုက် ဖန်တီးပုံဖော်ထားသော အလင်းထည့်ခုံအဆက်လိုက်ကို Everest Lighting မှ အရည်အသွေး နှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံကို အာမခံပြီး ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ထို့အပြင် ချစ်စရာကောင်းပြီး လှပဆန်းသစ်သော Lighting အမျိူးမျိူးကို တစ်နေရာထဲ စုံစုံလင်လင်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
Modern LED Down Light
ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များပေးစွမ်းကာအတောက်ပဆုံးအလင်းရောင်ပေးနိုင်တဲ့ Down light ဖြစ်ပြီးသက်သာသောဈေးနှုန်းကြောင့် လူကြိုက်အများဆုံးလည်းဖြစ်ပါသည်။LED Down Light ကို Home decoration,Corridor,Hotel,Luxury shop နှင့် ဧည့်ခန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံမှာတည်ငြိမ်ကာတောက်ပသောအလင်းရှိပါသည်။ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ကြာရှည်အသုံးခံခြင်းတို့ကြောင့် ဝယ်ယူသူများစိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေပါသည်။အမြင့်မားဆုံးနည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်သူတို့၏ Modern Down Light ဒီဇိုင်းအဆန်းများကို Customers များဝယ်ယူလိုပါက ကျွန်တော်များ Dream Light Technology တွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။